नेतृ कोइरालाको चेतावनी : ओलीको विकल्प खोजे मुलुकमा दु’र्घटना हुन्छ । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वि,कल्प खोजे मु’लुक दु,र्घटनामा पर्ने चे,तावनी दिनुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल् उहाँले अ‍ोलीको वि,कल्प खोजे मुलुकको लागि घा,तक हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘तीनवटै निर्वाचन नभएसम्म सरकार ढाल्ने सपना कसैले पनि देख्नु हुँदैन । त्यो आफ्नै लागि घा,तक हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोजे मुलुक दु,र्घटनामा पर्ने र त्यसको अपजस काग्रेसमाथि आउन सक्छ ।
अहिले सरकार ढाल्ने काममा लागे संविधान पनि कार्यान्वयन हुन कठिन छ । मुलुकमा प्रचण्ड मात्रै एक्लो नेता हुन् र उनको लागि सरकार ढाल्नु पर्ने ? उनी अहिले प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्दैनन् र सफल पनि हुँदैनन् ।’
कांग्रेस अहिले संगठन र पार्टीलाई बलियो बनाउँदै निर्वाचनमा जाने तयारीमा रहेको कोइरालाले स्पष्ट पार्दै निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले काग्रेससँग छलफल गरेर अघि बढाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो ।
Previous सरिता गिरी पार्टीबाट निष्कासित, सांसद पद पनि हिड्यो,,ताली या गा’ली?
Next विदेशी इसारमा चल्ने र वि,वाद सिर्जना गर्ने प्रचण्डलाई ठूलो क्ष,ती हुन्छ – सांसद बस्नेत…हेर्नुहोस।